Kan Wal Mormu Walitti Hin ida’amuu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooKan Wal Mormu Walitti Hin ida’amuu
Damee Boruu tin: 6/28/2018
Namni baayyeen heerga keessatti lakkobsi hin sobu jedhan dhageenya (Mathematics is an exact science). Yoo akka Abbaa Duulaa kan lakkawwan tahe isa lakkawwe lakkobsa miti kan sobe. Bara kana immoo kan argaa fi dhagaa jiru dhaadannoo farra uumaa tahe walitti ida’amna ykn dabalmna jedhu dha. Waan wal mormu lamaan yaroo walitti ida’amu wal balleessee dhumni duwwaa ykn zero taha. Fakkeenyaaf -4+ 4= 0. Fakkeenyi kun falaasummaa utuu taane seera uumaa ti. Afur keenyee yoo afur irraa kaafne kan hafu hin jiru. Akka hawwaasatti yoo hubachuu yaalle hawwaasa keessa humnan farra waliif thae ykn wal mormtu jira. Haati tokkicha ishee dhabde isa ilma ishee ajjeesse wajjin walitti ida’amuu jechuun maal jechuu dha? Abbaa marartee qarree isaa ajjeessanii warra bineesaaf laatan wajjin jaalala maaliitu isa qabatee wal ammata? Warra nama ajjeessuu fi uumatni du’aa jiru jidduu mormii araaramuu hin dandeenyetu jira. Jumulaan walitti ida’amna sagaleen jedhu guraan dhaga’uuf bareedaa haa fakkaatu malee waan dhugaa irraa fagaate jecha rakasa. Uumatni Oromoo utuu guyyaa guyyaan dhiigni dhangalaa jiru humna faashitii TPLF wajjin walitti ida’amuun hin danda’u.
Hawwasa keenya keessa gurmuun tokko utuu isaa hin galiin waanuma sagaleen kun bareedaa itti fakkaateef warri ofitti fudhatanii wajjin deemuu barbaadan jiru. Warri kun dammaqinsa ykn beekumsaa siyaasaa gahaa waan hin qabneef dhuukaa bu’aa jiru malee utuu karaa biraa waan bareedaa jecha kana caalaa isaan gammachisu dhaga’anii gara sana galgalu. Kanaafuu qabsawwan isaan kana komachuu dhiifnee akka karaa qajeelaa qabatanii dantaa mataa isaanii eegatan barsiisuuu fi dammaqisuun hojii keenya duraa tahuu qaba. Gurmuun lammaffaan warra dhaadannoon kun sirrii akka hin taanee utuu bareechanii hubatanii dantaa isaanii guutachuuf jecha dhaadannoo kanaan waan machaawwan fakkaatanii qabsoo bilisuummaa saba Oromoo daandii irraa maqisuuf maraataa jiran murannoon dura dhaabbachuu qabna.Warri ayyaan ilaallatoonni kun yoo qabsoon bilisummaa Uummata Oromoo gufate malee waan barbaadan argachuu waan hin daneenyeef waan qabsoo saba keenyaa gufachiisu hundaa hojjechuu irraa of booda hin jedhan.Warra kana waan barsiifnuu fi dammaqisnu hin jiru. Ayyaan-ilaallattoonnii fi TPLF hariiroo tokkicha qabu. Xiyyeefannaan isaanii inni duraa qabsoo bilisummaa saba Oromoo dhabmsiisuu dha.
Gurmuumuun sadaffaa kun humna haaraa OPDO keessaa dhalatee warra qabsoo Uumata Oromoof waan dhaabbatan fakkaatanii maqaa qabsoo Uummata Oromoon aangoo biyya Impaayeera Itoophiyaa qabachuuf bololi’aa jiru dha. Warri kun akka uummatni ka’ee isaan dura hin dhaabbatne waan uummatni dhaga’uu barbaadu dubbatu. Garuu hojin uummata wajjin hin jiran. Waggaa 27 EPRDF wajjin uummata isaanii irratti hammeenya hojjechaa haa turan malee har’a isaan keessa warri dararama saba isaaniif akkuma keenya waan quuqaa qaban waan jiran fakkaatu. Uummatni Oromoo TPLF/EPRDF wajjin aaraara hin qabu. Humna qabu maraan of irraa kaasuuf murteefattee dhiiga isaa dhangalaasaa jira. Humni haaraan OPDO keessaa of mul’isaa jiru immoo EPRDF kana qaruu malee balleessuu hin barbaadu. Yaroo tokko tokko humni kun warra EPRDF keessa jiran kana wajjin walitti bu’aa jiru fakkaata. Takkaa turanii immoo yaroo wajjin jiran aggarra. Eessa akka dhaabbatan gargar baasnee arguu waan dadhabnuuf warri kun diramaa hojjechaa jiruu jechuuf dirqamna.
Humni sadaffaa kun humna dongongoraa fi burjaaja’aa asii fi achi dhodhomoqee maqaa qabsoo uummatan aangoof qofa kan bololi’aa jiru fakkaata. Diina isaa dhugaa fi fira isaa kan isa tumsuu danda’u waan adda hin baafneef kan dura gaaga’amuuf deemu humna kana. Humna kanaan ammaaf kan deemaa jiru waan hundumaa ana qofatu beeka jedhee of agarsiisuuf Abbaba Biqilaa fi Maamoo Waldee caalaa Maraatoon namni fiigaa jiru Muumicha Ministeeraa EPRDF.
Impaayera Itoophiyaa keesatti har’a waan deemaa jiru adda baasanii beekuun salphaa miti. Kan ifa jiru human lama qofa. Tokkoffaan human faashitii TPLF du’uuf afuura baafachaa jiru. Humni faashitii kun tutuu hin dhabamiin dura gaaga’ama amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye biyyaa fi uummata irratti akka raawwachuuf deemu dagatamuu hin qabu. Humni faashtii kun riphee jira malee waan xuqqame hin qabu. Mataa mataa caasaa ishee irraa xuxxuqquun TPLF cabuu fi baduu hin dandeessu. Keessattu sanyi duguggaa uummata Oromoo irratti xiyyeefatte Oromiyaa guutuu keessattti Uummata Oromoo goluuf dhiga dhangalaasuuf sabaa fi sab-lammii naannoo Oromiyyaa jiran leenjiftee fi hidhachiiftee uummata keenya irratti bobaastee jirti. Kan lammaaffaa human uummatatti. Uummatni Oromoo karaa qindaa’ee hin qindoomneen humnaa TPLF/EPRDF duraa dhaabbachaa jira. Yaroo fi wareegama guddaa haa barbaadu malee akka of irraa darbus mamii hin qabu.
Humni sadaffaan EPRDF keessaa dhalachaa jiru kun aangoof dhaadannoo kijibaa fi wal mormun uummata burjaajjessa wixxifachaa jira malee akkamitti akka aangoo itti ol bahuu danda’u innuu qixxeessee waan hubate natti hin fakkaatu. Humna faashittii TPLF sossobaa fi ofitti ammachaa uummatti madaqsee kan suuta suuta aangoo irraa qicaccuuf deemu fakkaata. Kanaafuu humni haaraan OPDO keessaa dhalachaa jiru fakkaatu kun yaaduma OPDO kana dura beeknu Oromoo fakkaatanii uummata Oromoo fi qabeenya Oromoo gurguratnii ttiin bashananuu warra qabu dha. Waan haaraan yoo jijiraatee aangoo qabachuuf baayyee gojjomaa’anii jiraachuu isaanii ti. Galma isaanii kana gahuuf jecha nama gurra itti toluu fi haasaa nama hawwatuun uummata goowwomsanii qabsoo bilisummaa uummatni dhiiga itti dhangalaase asiin gahe irraa butachuuf gaadaa akka jiran ifatti saaxila baasuu qabna. Dhugaa dubbachuuf yoo tahe Dr. Abiyi maqaa Uumata Oromoo miti nama maqaa abbaa isa iyuu waamuuf qaana’u haqa Uummata Oromoof hin dhaabata jedhanii irraa eeguun gowwummaa guddaa dha. Kan nu baasu waan qabnu maraan WBO fi QBO wajjin dhaabbannee Fincila Xummura
Garbummaa finiinsuu qofa!
Qixxeessaa Lammii | Muddee 31, 2017 Goototni sabaaf qabsaawan saba isaanitti maqaa horuuf malee ofitti…